people Nepal » अत्याधिक गर्मीले चीनलाई बस्नै अयोग्य बनाइदिने खतरा ! अत्याधिक गर्मीले चीनलाई बस्नै अयोग्य बनाइदिने खतरा ! – people Nepal
अत्याधिक गर्मीले चीनलाई बस्नै अयोग्य बनाइदिने खतरा !
एजेन्सी । विश्वमै सबैभन्दा बाक्लो मानव वस्ती रहेको चीनको राजधानी बेइजिङसहित चीनको उत्तरी समथर भूभागमा पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको अत्याधिक प्रभाव देखिएको वैज्ञानिकहरुको भनाइ छ । यसै कारण केही वर्ष यतादेखि त्यस क्षेत्रको बढ्दो तापक्रम र अत्यधिक गर्मीले शताब्दीको अन्त्यसम्ममा सो स्थानलाई बस्नका लागि अयोग्य बनाइदिन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
सीएनएनका अनुसार वैज्ञानिकहरुले हालै गरेको नयाँ अध्ययनपछि यस्तो तथ्य पत्ता लागेको हो । यसैले कार्बनको प्रयोगमा भारी कटौति नभएसम्म सो क्षेत्रको मौसम पूर्ण रुपमा बदली हुने र तातो हावाको लहर बढ्दै जाँदा केही वर्षपछि मानिसहरु घरबाहिर काम गर्नै नसक्ने अवस्था आउने वैज्ञानिकहरुको भनाइ छ ।
सो भूभागमा राजधानी बेइजिङ पनि पर्ने हुँदा यसबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । वास्तवमा त्यहाँका ४० करोड भन्दा बढी जनता कृषिमा सक्रिय रहेकाले पनि मौसमको अवस्थाले उनीहरुको पेशा लगायत जीवनशैलीमा ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित छ । अध्ययनका अनुसार बढ्दो तापक्रम र उच्च ह्युमिडिटीको अवस्थामा बाहिर बस्दा स्वस्थ मानिसको समेत ६ घण्टामै ज्यान जान सक्छ । त्यसकारण यसले कृषि क्षेत्रमा आबद्ध मानिसहरुलाई बिना कुनै उपकरण बाहिरी कार्यमा संलग्न हुँदा ठूलो खतरा निम्त्याउने बताइएको सीएनएनको समाचारमा जनाइएको छ ।
यसरी जलवायु परिवर्तनको क्रम जारी रहने हो भने भविष्यमा सो क्षेत्र अत्यन्तै भयानक ताप लहरको शिकार बन्ने एमआइटीका प्रोफेसर एल्फेथ एल्ताहिरले बताएका हुन् । उनी भन्छन्, ‘चीन वर्तमानमा ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन गर्ने सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ता हो । र वर्षौँदेखि यसले चीनकै जनसङ्ख्यामा गम्भीर प्रभाव पार्दै आएको छ ।’
त्यसकारण पनि अहिलेको अवस्था जारी रहने हो भने यसले पृथ्वीमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशको अधिक आबादीयुक्त क्षेत्रमा समेत मानव जीवनलाई सीमित गराइ बस्नका लागि अयोग्य बनाइदिने उनको भनाइ छ । यो अध्ययन मानिसहरु सीमित तापक्रममा मात्र बाँच्न सक्छन् भन्ने खोजमा आधारित भएर सुरु गरिएको थियो ।
स्वतन्त्रताको सीमा हुँदैन, मर्यादाको सीमा नाघ्न मिल्दैन : मन्त्री बाँस्कोटा